Famaritana sy Ohatra ho an'ny isam-bokin'ny geometrika
Famaritana ny isomera ara-jeômetika (cis-trans-isomers)
Ny fomba fiasan'ny Cis-Trans Isomers
Ny isomera dia karazam-bozaka mitovy amin'ny simika mitovy, nefa tsy mitovy. Ohatra, manazava ny isomerization geometry:
Geometric definition of isomer
Ny isommera geometrika dia karazana simika mitovy karazana sy karazana atôma amin'ny karazany hafa, nefa manana rafitra geometrika hafa. Ny atôma na ny vondrona dia mampiseho ny rafitra ara-tsimia hafa eo amin'ny lafiny roa amin'ny fatorana orinasa simika.
Ny isomeris geometrika koa dia antsoina hoe isomorisa amin'ny konfiguraura na isomerisma cis-trans. Fanamarihan'ny cis-trans isomerism dia fanoritsoritana samihafa momba ny jeometria noho ny isomeris EZ.
Ny teny cis sy trans dia avy amin'ny teny latinina cis , izay midika hoe "ety an-daniny". ary trans , midika hoe "etsy andaniny". Rehefa manitsy ny iray amin'ireo fomba roa ireo ny mpanelanelana (eo amin'ny lafiny iray) dia antsoina hoe cis ny diastereomera. Rehefa eo amin'ny andaniny mifanohitra ireo mpanelanelana, dia miova ny fizotra.
Ireo Cis sy isomaretsin'ny geometry dia maneho ny toetra samihafa, anisan'izany ireo tebiteby, ny fihetsika, ny tebiteby, ny tebiteby, ary ny solosaina. Ny fironana eo amin'ireo fahasamihafana ireo dia vokatry ny fiantraikan'ny dipole amin'ny ankapobeny. Mifamototra ny singa sasany amin'ny mpanodina sivana, izay mampiavaka ny dipolo ny substituents cis. Ao amin'ny alkenes, ny isomera trans dia manana teboka avo lenta, mora vidy, ary singa lehibe kokoa noho ny cis isomers.
Famantarana ny Isomers Geometrika
Ny rafitra skeleta dia mety nosoratana tamin'ny tsipika mifamatotra amin'ny fatorana mba hampisehoana ireo isomera geometrika. Ny IUPAC dia tsy manoro-hevitra ny tsipika voambolana hafa, ary maniry ny tsipika maranitra mampifandray fifamatorana roa amin'ny heteroatom. Raha fantatrao, dia tokony aseho ny tahan'ny cis- to trans-structures.
Ny Cis- sy ny trans-dia nomena ny tosika ho an'ny rafitra simika.
Ohatra avy amin'ny Isomers Geometrika
Ny isam-paritra roa dia misy ny Pt (NH 3 ) 2 Cl 2 , izay misy ny karazana manodidina ny Pt ao amin'ny lamina Cl, Cl, NH 3 , NH 3 ary ny iray hafa izay nomena ny karazana NH 3 , Cl, NH 3 , Cl.
Famaritana ety anaty alika sy siansa
Inona no atao hoe masoandro? Latabatry ny singa element
Famaritana momba ny toetr'andro sy ny fampiasana Neutron
Famaritana ny Fanjakana Ground
Famaritana sinoa kininina
Famaritana ny Spectrum
Famaritana ny fananana ara-batana
Nahoana ny ranomandry no misidina?
Ny taonan'ny fisotroan-toaka any Kanada
Fanapahan-kevitry ny Oniversite maro kokoa
Fampidiran-tseraseran'ny fanjakana ao San Diego
Andro ny Pentekost Bible Study Guide Guide
Farao Amenhotep III sy Queen Tiye
Inona no Modelin'i Gravity?
Classic sy Vintage Motorcycles tamin'ny taona lasa
Fahalalana malaza momba ny Blackbeard ny Pirate
UC Davis GPA, SAT, ary ACT Data
Inona no teny farany nataon'i Vespasian?
Ady lehibe faharoa: Operation Ten-Go
Ny momba ny fananganana State Empire
Dingana faharoa momba ny fambolena Qi: Fangatahana Qi
Ny sidina dia manana tombontsoa ara-batana, ara-tsaina ary ara-tsosialy
Sikh Baby anarana manomboka amin'ny T
Ny raharaha famonoana an'i Emily Sander
Mildred Wirt Benson, aka Carolyn Keene Biographie
Teny fohy momba ny College